Godka taayarrada dayuuraddii ay dadku xoogga ku raaceen oo laga helay dad googo’an (Ciidanka Cirka oo dib u daawanaya muuqaalladii laga duubay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Godka taayarrada dayuuraddii ay dadku xoogga ku raaceen oo laga helay dad...
Godka taayarrada dayuuraddii ay dadku xoogga ku raaceen oo laga helay dad googo’an (Ciidanka Cirka oo dib u daawanaya muuqaalladii laga duubay)
(Washington, DC) 18 Agoosto 2021 – Ciidanka Cirka Maraykanka ee USAF ayaa sheegay inay baarayaan duruufihii ku hareeraysnaa dayuuraddii C-18 Globemaster oo haatan godka taayarradu galaan laga helay googo’a dadka ku dhintay.
Dayuuraddan oo ay dad badani xoog ku raaceen ayaa sidoo kale waxaa jirey qaar ku daba dhegey ama taayarrada iwm ku dhegey oo deeto soo daatay isla markii ay kacday maadaama aanay u adkaysan karin cadaadiska daran ee hawada bannaanka.
Qodobbada muhimka ah:
USAF waxay dib u eegayaan xogta ku saabsan dayuuraddan iyo dadka ku dhintay
Ugu yaraan 7 qofood ayaa ku dhintay qalalaasaha Garoonka Kabul oo ay haatan gacanta ku hayaan Maraykanku
Joe Biden iyo Boris Johnson ayaa isku raacay inay kulan dhanka khadka ah u qabtaan dalalka G7 si looga wada hadlo istaraatijiyad midaysan
“Maadaama ay wajahayeen xaalad kasii daraysey waxay shaqaalihii dayuuradda C-17 guddoonsadeen inay u duulaan sida ugu dhaqsaha badan.” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Ciidanka Cirka oo sheegay inay baarayaan arrinta iyagoo xitaa tixraacaya muuqaallada lasoo dhigay baraha bulshada oo la arkayey dadka oo dhinac ordaya dayuuradda qaarkoodna ay xitaa halis ugu jiraan inay laqaan matoorrada xoogga badan ee dayuuradda ku xiran maadaama ay marayeen meelo aan loogu tala gelin in loosoo dhowaado.
Previous article”Somalia ma aha Afghanstan, Daalibaanna ma aha Al Shabaab!” – Weriye Turki ah oo bilaabay dood xasaasi ah & Soomaalida hal arragti u badatay
Next articleErdoğan oo talo muhim ah usoo jeediyey RW Abiy Ahmed si loo xalliyo xasaradda dalkiisa